Iapile isebenza kwilungelo elilodwa lomenzi kwinto ekhutshiweyo yesikrini esibonisa ilaptop okanye: kude kube nini side sibone i-ipadbook yomoya?
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo IApple ifaka isicelo selungelo elilodwa lomenzi kwimbonakalo yelaptop ekhutshwayo okanye: Kude kube nini sibona i-iPadBook Air?
IApple ifaka isicelo selungelo elilodwa lomenzi kwimbonakalo yelaptop ekhutshwayo okanye: Kude kube nini sibona i-iPadBook Air?
Ngokusisiseko, zimbini iindlela ezahlukeneyo ezisebenza ngeApple. I-Apple iyakuthatha imakethi yesixhobo esiwele kwizibuko, kwaye siyitofe kunye nemincili (jonga: iiMP3 players, ii-smartphones, iitafile), okanye iApple izakujonga ukuba ezinye iinkampani ziphumelela njani kwaye zenze into efanayo, kodwa nge eyongezelelweyo i-Apple 'magic' (funda: ukuthengisa). Izolo, uApple ufake isicelo selungelo elilodwa lomenzi weLaptop yescreen esisuswayo esingayilindelanga ukuba ibe sisixhobo, kodwa sikhomba kumbuzo obalulekileyo: Kude kube nini sibona i-iPadBook Air?
Ukugcwaliswa kwelungelo elilodwa lomenzi kubonisa isixhobo esiya kuba lilaptop, hayi isixhobo esiphathwayo, esinomboniso osuswayo wesikrini. Umboniso unokuqhagamshela kwisiseko seelaptop ngefomathi ye-ultrawideband ye-60GHz (njengeWiGig mhlawumbi). Umboniso uya kusebenzisa ukutshaja kwe-induction ngehenjisi yelaptop ukuhlawulisa umboniso ngokusetyenziselwa ukubhadula.
Ukucaca, le patent ayisiyisixhobo esidibanisa i-iPad kunye neMacbook. Le patent yeyelaptop, enesibindi sekhompyuter kwicandelo lekhibhodi. Kodwa isikrini sokuchukumisa siyakhutshwa kwaye sinokusebenzisa uqhagamshelo olukude ukusebenzisa amathumbu ekhompyuter, asekhibhodi. Ke, le patent yetekhnoloji, endaweni yesixhobo esisebenzisekayo, kuba asizukubona naziphi na izibonelelo zokuba oluqwalaselo lube ngaphezulu kwento efana ne-Windows 8 hybrid, okanye i-Android transformer tablet.
Okona kuncinci nangona kunjalo, le patent ibonisa ukuba iApple ijonge iindlela ezahlukeneyo zokuguqula imveliso.
UApple uyakhanyela ide ingabinako ukukhanyela kwakhona
Ukujonga kwakhona kwi-Apple & apos, izimvo, siya kufumanisa ukuba iApple ithe kaninzi ukuba ibona ngathi iilaptops zescreen asiyomfuneko, kuba eyona ndlela yokuhambisa i-multitouch yile trackpad. Ewe kunjaloI-Apple & apos; s modus operandi: yithi into ayiyomfuneko ukuze ingachaphazeli ukuthengiswa kwesinye isixhobo (kule meko i-iPad), emva koko wenze loo nto 'ingafunekiyo' xa indawo yentengiso yeApple kunye neapos;.
Umzekelo, iApple ngokuqhubekayo iyala ukuba iyakuze yenze i-smartphone de ukuthengisa kwe-iPod kuqale kwithafa, kwaye ngequbuliso i-iPhone yazalwa. I-Apple ngokuqhubekekayo ibanga ukuba ayisoze yenze ithebhulethi ye-intshi ezi-7, de kube ngumlilo oMlilo kunye neNexus 7 eqale ukutya kude kwi-tablet yayo emva koko sabona i-mini mini ye-iPad. Ngoku, into efanayo inokwenzeka kakuhle ngokudityaniswa kweePC zemveli kunye nezixhobo eziphathwayo. U-Apple uyaqhubeka nokubanga ukuba ilaptop yesikrini sokuchukumisa ayisiwo amakhadi, kwaye i-iPad ayifuni zincedisi zebhodibhodi. Inkampani kusafuneka ibeke izicwangciso zokudibanisa i-iOS kunye neMacOS, kodwa loo mhla uyeza, ngaba ayisiyiyo?
I-Android sele inamacwecwe amancinci anezixhobo ze-laptop dock. I-Canonical ifuna ukwenza Ubuntu kwi-OS efanayo Ukusuka kwiifowuni yonke indlela ebuyela kwiiPC zemveli. Kwaye iMicrosoft & apos sonke isicwangciso esineWindows 8 kukufiphaza imigca phakathi kweetafile kunye neelaptops. Isizukulwana sokuqala sezixhobo zeWindows 8 sibonisile esi sicwangciso, kodwa uninzi luwela kumngxunya wokuqala wesizukulwana sokuba ngujack wabo bonke ubugcisa kodwa kungabikho nanye. Abanye banokuthi babambe ibango kwiMicrosoft Surface Pro njengesixhobo esibonisa ikamva leWindows, kodwa abanye balatha kwizixhobo ezinjengeLenovo kunye neapos; s Yoga eguqukayo.
Nokuba yeyiphi eyona ndlela iphambili eya kwiWindows, abavelisi baya kuqhubeka nokutyhala de bayifumane. Kwaye, ekugqibeleni iba ngumbuzo wokuba iApple kunye neapos; s iPad kunye neMacbook combo (eqala nge ~ $ 1500) inokubamba isabelo esaneleyo sentengiso ukugcina iApple yonwabile ebusweni bezixhobo ze-Android kunye neeWindows.IPadBook yexesha elizayo (okanye i-iPad Maxi okanye i-iPad Air)
I-Android sele isitya isabelo sentengiso yeethebhulethi ka-Apple, kwaye kukho amarhe okuba i-Android iya kwenza ukutsiba ukusuka ekuguqulweni kwamacwecwe ukuya kwiilaptops ezipheleleyo kungekudala. IWindows inokuphakamisa ukubusa kwayo kwimakethi yemveli yePC ukongeza kumanani ayo 'eselfowuni' ngezixhobo eziguquguqukayo kunye neziguquliweyo ezingaphezulu.Ekugqibeleni, iApple izakunikezela kwaye idibanise kunye i-iOS kunye neMacOS, kwaye isixhobo sokuqala ukuyenza kuya kuba yimashup ye-iPad kunye neMacBook Air.. Kuyenzeka ukuba iApple ihambe ngokudibana okupheleleyo kwaye ibuye inikeze idoksi kwi-iPhone eya kuyiguqula ibeyiMac yemveli, kakhulu njengezicwangciso zeCanonical & apos zeBuntu, kodwa ngakumbi iya kuba sisixhobo esiza kukhuphisana ngqo IMicrosoft & apos; s fleet yezixhobo ezihlanganisiweyo.
Igama lesixhobo ngokucacileyo kunzima ukuqagela. Eyona nto inokudityaniswa kwezixhobo iya kuba kukutshintsha ukuboniswa kweMacBook Air ye-iPad, ethi ngokomthetho wegama lokudibanisa ibe yi-iPadBook okanye i-iPad Air. Kwaye, ukuba uyalisusa icala lebhodibhodi, uya kushiyeka nge-iPad Maxi, kuba kubonakala kungenakulindeleka ukuba iApple isebenzise umboniso we-9.7 intshi kwilaptop. Iscreen seLaptop esincinci esibonelelwa nguApple yi-11 intshi iMacBook Air, kwaye i-intshi ye-11 intshi ngokuqinisekileyo iya kuwela phantsi kwesihloko se-iPad Maxi (ukuba ayikho kwisihloko esisemthethweni, emva koko kwisangqa sobuchwephesha.)
Ibhotile yokwenyani yeApple ngoku ekuphumezeni oku kuya kuba kwicala lesoftware. Ngokubhekisele kwizixhobo zokusebenza, kulula ukuba kutshintshwe umboniso weMacBook Air kwi-iPad enkulu. Ingxaki kukuba ukudala ubuncinci ibhulorho phakathi kwe-iOS kunye neMacOS ngumsebenzi omkhulu. U-Apple wenze izinto ezincinci kumphezulu we-MacOS, njengokufaka iVenkile ye-Mac, kunye nokongeza iLaunchPad, ethi ibalule abasebenzisi beelaptop ngobomi nge-iPad, kodwa kukho & ampos; umsebenzi omninzi wokwenza iiapps zibaleke ngokwendalo kwiMacOS okanye zenze iparadigm entsha yeapp (njengeWindows 8). Ngokubhekisele kwintengiso, kubonakala ngathi lelona thuba lilungileyo kuya kuba kukukhupha i-intshi ye-11 ye-iPadBook Air kunye neMacOS 11 ekufanele ukuba iza kunyaka olandelayo, kodwa loo nto ayisiyixesha laneleyo lokuba iApple isebenze konke.
Umbuzo apha awukho & apos; ukuba olu manyano luyakwenzeka, kodwa nini. Ayizukwenzeka nanini na kungekudala. Ukongezwa kwe-mini mini kuluhlu kuya kunceda iApple ukuba ikhanyele okungenakuphepheka okwethutyana. Kwaye, iWindows 8 isengu-OS yotshintsho yeMicrosoft, oko kuthetha ukuba izixhobo zixinene kwilimbo elixakekileyo apho abavelisi bengenangqondo yekhonkrithi yendlela yoyilo olufanelekileyo. Ekugqibeleni, iWindows iya kuba ngokupheleleyoIndlela engaphantsiI-UI yale mihla, kunye nokudibana okwenyani phakathi kweWindows 8 kunye neWindows Phone 8 kuya kucaca ngakumbi. Isenokuba ngowenye unyaka okanye emibini kude, oko kuthetha ukuba iApple ayizukuva ubushushu kwelo cala.
Kwelinye icala, i-Android ijonge ukuqhubeka nokuhamba kwayo kuso nasiphi na isixhobo esijikeleze indawo, kwaye njengoko i-Android 10-intshi yeapps ye-ecosystem iyaqhubeka nokukhula, kuya kubakho izixhobo ezingakumbi nangaphezulu ze-Android eziqala ukukhuphisana ngqo neelaptops zemveli. I-Android ibihamba ngokukhawuleza kuneWindows kwezi ntsuku, sinokuqala ukubona izixhobo ze-Android ezinokuba ngabakhuphisana ngokusemthethweni kwi-MacBook Air kwangoko kunyaka olandelayo. Kwaye, oko kuya kubeka uxinzelelo ngakumbi kwi-Apple yokwenza into ebisoloko iyala.
umthombo: Sebenzisa nge Engadget
ucima njani i-samsung s21
yenza isitshixo esitsha mac
Eyona nto ibalaseleyo kumthala we-3
Ii-Unicorn ze-SDET- Kutheni le nto kunzima kakhulu ukuqesha ii-SDET?
I-Auxillite ikuvumela ukuba ubize i-Apple iPhone 7 yakho okanye i-iPhone 7 Plus ngelixa umamele umculo
I-iPhone 13 Mini vs iPhone 12 Mini: into esiyaziyo ukuza kuthi ga ngoku
I-Apple iPhone 12 / Pro 18W vs 20W vs 5W vs MagSafe adapter isantya sokutshaja
IMicrosoft Surface Pro 8 isexelwe kwimisebenzi, ngoku ibotshelelwe ukuze kukhululwe ukuwa
I-Verizon iyaphoxa, i-AT & T iyothusa, kunye ne-T-Mobile ikhanya kuvavanyo lwesantya esitsha se-5G